Bas ay la socdeen ciyaartoyda Koonfur Galbeed ayaa lagu weeraray dhagxan kadib markii… – Hagaag.com
Bas ay la socdeen ciyaartoyda Koonfur Galbeed ayaa lagu weeraray dhagxan kadib markii…
Posted on 29 Diseembar 2020 by Admin in National // 0 Comments
Waxay ahayd dhacdo dad badani ka yaabisay markii uu soo baxay warka sheegaya in Magaalada Muqdisho lagu weeraray bas ay la socdeen ciyaartoyda kooxda Koonfur Galbeed.
Baska ayaa lagu weeraray agagaarka Garoonka Injineer Yariisow, waana wax yar ka dib markii ay soo idlaatay ciyaartii garoonkaasi ku dhex martay kooxaha Banaadir iyo Koonfur Galbeed, oo 3-1 ay guusha ku raacday kooxda Gobolka Banaadir.
Wararka ayaa sheegaya in weerarkaasi loo adeegsaday dhegxaan, ayna ku dhaawacmeen tiro ka mida ciyaartoyda oo la geeyay Isbitaalka Digfeer.
Gudoomiye Kuxigeenka Dhinaca Siyaasadda iyo Amniga ee Maamulka Gobolka Banaadir, Cali Cabdi Wardheere (Cali Yare) iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan Maamulka Koonfur Galbeed ayaa isbitaalka ku booqday ciyaartoydaasi.
Cali Yare ayaa sheegay in weerarkaasi uu u muuqday mid loola dan lahaa ciyaartoyda Gobolka Banaadir, maadaama ciyaartoyda kooxda Koonfur Galbeed ay saarneyd bas uu leeyahay Maamulka Gobolka Banaadir.
Dhanka kale hay’adaha ammaanka ayaa wada baaritaan la xiriira weerarka Magaalada Muqdisho loogu gaystay ciyaartoydii Maamulka Koonfur Galbeed ku meteleysay tartanka koobka kubadda cagta ee Dowlad Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir.
Waa weerarkii ugu horeeyay oo ceynkiisa ah Caasimadda Muqdisho loogu gaysto ciyaartoyda, tan iyo markii tartankan laga bilaabay dalka, dhawr sano horteed.